Maxaad Kataqanaa Midabyada Carrada? |
Wax kabaro qisooyinka diiniga ah||Tukesomalism.com
Carradda ayaa ku kala gadisan xagga muuqaalka, qayb waa madow, qaybna waa gaduud. Qaybna waa cadaan kuwo kalena waa isku jir oo midab koodu waa mushakal madow, caddaan, iyo gaduud ayay ka dhaxeeyaan. Haddii aan wax ka sooqaadano midabyada ay carradu leedahay waxaa ka mid ah:-
B) Carro gaduud
C) Carro cadaan ah
D) Iyo mid gaduud iyo madow isugu jirta
A) Carro madow:- Waa carro midabkeedu yahay madow waana carro ay ku badan tahay walxaha burburka ah. Nafaqo saa’id ah ayay leedahay oo ay ka dhaxashay haraadigii hore. Waana mid si toos ah loo arko marka ufiirsato qaybaha ciidda iyo midab yadooda
B) Carro gaduud:- Waa carro midabkeedu gaduud yahay qaybtoodna ay casuus tahay. Waana carro badanaa caan ku ah gobolada dhexe waana carro ciid ah oo aan ahayn carro dhoobalay ah. Carradaan beerashada kuma fiicna oo waxa ay siidaysaa oo laqdaa biyaha. Malahan biyo qabatin oo dal daloolada ayaa saa’id ah cabir kooda iyo ilaha.
Eeg sawirkaan hoose oo ufiirso muuqaalka uu leeyahay, waa carro casuus ah. Marka laga hadlaayo carro gaduud, isku mid ma ahan oo waxaad arkaysaa qayb tikh ah, qayb casuus ah, kuwo iska caadiya oo dhex dhexaada midabkooda aan ahayn casuus tikhna ahayn.
C) Carro cadaan ah:- Waa carro cad waxaana inta badan laga helaa meelaha xeebaha ah. Waana carro sulux ah oo sida carro gaduudka ahayn kana yare duwan. Waxaana odhan karnaa ma ahan mid wax lagu beeran karo, waayo waxaa aad ugu badan cusbada maadaama ay tahay ciid xeebeed.
Isku soo wada duuduubo midab yada waa ay ku kala gadisan yihiin sida aad ku arki kartaan jaantuskaan hoose una fiirso midab yada ay leeyihiin. Haddii aad awoodana in aad xisaabiso ama aad sheegto midab koodu waa fiican tahay.
Jaantuskaan sare haddii aad dhab u eegto waxaad ku arki doontaa midabyo kala gadisan.
Sida carro guduud ah, carro madow, carro cad iwm. Guud ahaana waa toban carro oo mid kasta jaad gooniya tahay.
Waana kuwo laysku keenay si aad ufahanto in ay carradu aysan isku mid ka ahayn xagga midabka ayna ku kala duwan yihiin cabir ahaan iyo nafaqo ahaanba. Waxaa laga yaabaa in aysan isku macaadin ahayn, ayna ku kala fiican yihiin xagga waxtarka iyo adeegsigooda.
Tags: Midabyada Carrada
Next post Waa Maxay Carro-dibir?
Previous post Qiso uu Igaga Sheekeeyay Oday Waayeel Ah